Iyo mhango bhora yemavharuvhu inoitwa nesimbi coil welding mamiriro. Izvi zvinowanzo fanirwa nemavharuvhu ebhora ane kumanikidzwa kwepasi pane kana kuenzana ne5.0MPA (CLASS300). Rudzi urwu rwemuviri wevhavha rakareruka huremu uye mhango yemukati iri nyore kugadzirisa, asi kutarisisa kwakakosha kunofanirwa kubhadharwa kurongwa kwembabvu mukugadzirwa kwekudzivirira muviri kutsemuka. Iyo simbi yakanyungudutswa yesimbi panguva yekuratidzwa kwenzvimbo yesimbi isina simbi inoyerera zvakasununguka. Kuitisa ...
Hollow Valve Mabhora Mugadziri
Zvatinoita? Xinzhan inotarisa mukugadzira ese marudzi emhango vharuvhu mabhora nekushandisa akawanda akasiyana zvinhu. Hollow bhora inogadzirwa necoil welded simbi ndiro kana musono isina simbi machubhu. Bhora rakadzika rinodzora mutoro wechitenderedzwa chepamusoro uye chigaro chevhavha nekuda kwehuremu hwayo hwakareruka, iyo inobatsira kuwedzera hupenyu hwebasa hwechigaro chevhavha. Kune mamwe makuru akakura kwazvo kana zvivakwa, bhora rakasimba raisazoshanda. Hollow vharafu mabhora anogona zvakare kugadzira ichiyangarara mhando kana tr ...
Bhora rakadzika rinodzora mutoro wechitenderedzwa chepamusoro uye chigaro chevhavha nekuda kwehuremu hwayo hwakareruka, iyo inobatsira kuwedzera hupenyu hwebasa hwechigaro chevhavha. Kune mamwe makuru akakura kwazvo kana zvivakwa, bhora rakasimba raisazoshanda. Hollow vharuvhu mabhora anogona zvakare kugadzira inoyerera mhando kana trunnion yakamisikidzwa mhando, mbiri nzira kana yakawanda-nzira mhando. Iwo maviri akanyanya kukosha maitiro evhavha mabhora kutenderera uye kumeso kupera. Iko kutenderera kunofanirwa kudzorwa kunyanya mu ...
Hollow Valve Mabhora Fekitori
Hollow mabhora ayo akagadzirwa ne coil welded simbi ndiro kana musono isina simbi machubhu. Bhora rakadzika rinodzora mutoro wechitenderedzwa chepamusoro uye chigaro chevhavha nekuda kwehuremu hwayo hwakareruka, iyo inobatsira kuwedzera hupenyu hwebasa hwechigaro chevhavha.
Hollow Matatu Way Valve Mabhora
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Featured Zvigadzirwa - Sitemap Bhora Valve Zvikamu, L Pattern Valve Balls , 304 Uye 304l Valve Bhora , A350 Lf2 Valve Ball , Balls For Valves , L Type Valve Balls ,